Xaaladda magaalada Galkacyo oo deggan & wadahallo lagu joojinayo xiisaadda colaadeed oo socda. – Radio Daljir
Diseembar 25, 2009 12:00 b 0
Galkacyo Dec 25- Xaaladda magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta aad u deggan kadib markii labadii maalmood ee aynu soo dhaafnay ka ka dhacayeen iska-horimaaddo hubaysani.
Inkastoo in badan uu xiran yahay suuqa weyn ee magaalada Galkacyo iyo goobaha ganacsiguba, haddana waxaa caadi ku soo laabtay isku socodkii dadka iyo gaadiidka meelihii ay iska-horimaaddadu ka dhaceen ee aggagaarka suuqa weyn ee magaalada Galkacyo.
Dhanka kale waxaa socda dadaallo dheeraad ah oo ay ku hawllan yihiin mas?uuliyiinta labada dhinac, salaadiinta dhaqanka iyo waxgarad kaleeto oo aad u tiro badan, taasi oo lagu doonayo in lagu soo afjaro isku dhacyaddii labada maalmood ka taagnaa gudaha magaalada Galkacyo.
Dadka u guntaday damin xiisadda ka dhalatay iska-horimaadyadii ka dhacay Galkacyo, ayaa illaaa iyo haatan ku guulaystay in ay furmaan wadahadallo nabadeed oo xal buuxa looga gaarayo colaadda arrinkaasi iyo sidoo kala in la kala durkiyo ciidamadii darirtu ay dhaxmartay.
Mas?uuliyiinta labada dhinac iyo sidoo kala qaar ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee ku hawllan soo afjaridda colaadda Galkacyo oo ay idaacadda Daljir la xiriirtay ayaa sheegay in ay ku han weyn yihiin xal nabadeed oo buuxa in ay ka gaaran daminta dabka colaadeed ee hulaaqaya.
Degganaanshaha maanta ee magaalada Galkacyo iyo wadahallada nabadeed ee lagu gudo jira, ayaa ka danbeeyey kadib markii labadii maalmood ee ugu danbeeyey gudaha magaalada Galkacyo ay ka dhaceen iska-horimaaddo xooggan oo gaystay khasaarooyin naf iyo maalba iskugu jira.
Dadka badan 30 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen isku dhacyada labadii maalmood ee ay socdeen, waxaana dadka ku dhaawacmay lagu tilmaamayaa in ay gaarayaan ku dhawaad 100 qof, sida laga soo xigtay maamullada labada dhinac iyo saraakiisha caafimaadka ee ka hawlgala xarumaha caafimaad ee ku yaalla magaalada Galkacyo oo dadka badankooda la jiifiyey.
Dagaalladaan labada maalmood socday ayaa u dhaxeeyey ciidamada maamulka degmada Galkacyo ee Puntland iyo dad shacab ah oo gacan siinayey iyo ciidamada maamulka Galmudug, waxay ka dhasheen kadib markii la dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda hoose ee magaalada Galkacyo ee maamulka Puntland, kaasi oo raggii toogtay ay u baxsadeen xaafadda wadajir ee koonfurta magaalada Galkacyo.
Ma ahan markii ugu horraysay oo iska-horimaad noocaan oo kale ah uu ka dhaco magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug, 29 October ee sanadkaan ayay ahayd markii sidaan oo kale magaalada uu uga dhacay iska-horimaad hubasan, kaasi oo gaystay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira.